Blog – Dangisharan Khabar
–छविलाल कोपिला बाबाकि सगर गैनु हाँ, मुरिया लहाने सखी ए हो, सेंडुर छुटल पानिघाट, सखी ए हो ! …….केही दिन यता थारू वस्तीहरूमा यी र यस्तै गीतहरु सुनिन थालेका छन् । यो मघौटा गीत हो । माघ पर्वमा मघौटा, ढमार र ढुम्रु विषेशगीतको रूपमा लिइन्छ । माथिको गीतले माघ आगमनको […]
घोराही , ५ पौष। थारू समुदायको ठूलो पर्व माघ नजिकिदै गर्दा थारू बाहुल क्षेत्रहरुमा माघ कार्यक्रमका लागि तयारी तिब्र पारिएको छ। यस्तै बिगतका वर्षहरुमा जस्तै दाङमा यस वर्ष पनि दुई दिन माघ महोत्सव हुने भएको छ। थारू कल्याणकारीणी सभा दाङको मुख्य आयोजना र एक दर्जन बढी संघसंस्थाको सह-आयोजनामा दाङको घोराहीमा […]
सुशील चौधरी निरन्तर राजनीतिक संक्रमणकालका कारण आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको क्षेत्रमा गतिलिन नसेकेको हाम्रो देश, संविधनासभाबाट संविधान निर्माण र २०७२ असोज ३ गते घोषित भएर लागु आएपछि मुलुकले गति लिएको छ । समावेशी सिद्धान्त सहितको सहभागितामुलक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संविधानले अंगिकार गरेको छ । लामो समयसम्म एकात्मक […]
काठमाडौं, कात्तिक ०४। तिहारको बेला नेवार समुदायद्वारा मनाइने स्वन्तिः को तिथि बिगारेको भन्दै नेवार समुदायले राष्ट्रिय पञ्चांग अर्थात् पात्रो बहिष्कार गरेको छ । तिहारमा पर्ने म्हः पूजा र नेपाल संवतलाई नेवार समुदायले परम्परागत रुपमा एकैदिन मनाउदै आएको छ । तर यस वर्ष यि दुई पर्वलाई राष्ट्रिय पञ्चांग निर्णायक समितिले बेग्लाबेग्लै […]
-कृष्ण समर्पण डस्या नाचगान, रिटिरिवाज, डिउँटा ओ स्वर्गवासी पुर्खाहुँकहनसे जोरगैलक थारुनक एकठो टिह्वार हो । माघ, अस्टिम्कि ओ अट्वारी असख डस्या फे थारुहुकहनके एक्ठो बरुवार टिह्वार हो जहाँ आपन स्वर्गवासी पुर्खाहुँकहन सम्झना कैजाइट । डस्य म पिट्टर डेके स्वर्गवासी पुर्खाहँुकहन सम्झना कैजाइट । डस्या आपन डेवि डेउटावन मन्ना टिह्वार हो। […]
आज राष्ट्रिय बाल दिवस । सर्वप्रथम बाल दिवसको अवसरमा सम्पूर्णमा शुभकामना छ । आजका साना साना बालबालिकाहरु भोलिका देशका कर्णधार हुन, भबिष्य हुन । त्यसैले बाल अधिकारको संरक्षण गर्नमा राज्यको प्रमुख दायित्व हुन्छ । बाल अधिकार हामी सबेको सरोकारको बिषय हो । बाल अधिकारको संरक्षणमा स्थानिय सरकार, सघ सस्था, बिद्यालय […]
आईतबार तुलसीपुर क्षेत्रका विद्यालय बन्द रहने
दंगीशरण खबर १३ भाद्र २०७६, शुक्रबार १४:३१
१३ भदौ। आईतबार तुलसीपुर क्षेत्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरु बन्द हुने भएका छन् । पश्चिम नेपालको थारू समुदायको दोस्रो ठूलो पर्व ‘अट्वारी’को अवसरमा निजी तथा सामुदायीक विद्यालय बन्द हुने भएका हुन् । वार्षिक विदा कटौती गरि आईतबार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले जानकारी दिएको छ । थारू समुदायमा […]
-छविलाल कोपिला अट्वारी, थारू जातिहरुको माघी पछिको दोस्रो ठूलो पर्व मानिन्छ । योे पर्वमा खास गरेर पुरुषहरु निराहार व्रत बसेर मनाउँछन् । यद्यपि स्वेच्छाले केही महिलाहरु पनि व्रत बस्ने गरेको पाइन्छ । दीर्घायू, सुस्वास्थ्य एवम् सुखमय जीवनको कामना सहित मनाइने अट्वारी भदौ महिनामा पर्छ । तर कुनैै साल असोजमा पनि […]
Report shows that 37% of girls in Nepal marry before the age of 18, and 10% are still married by the age of 15 in spite of the fact that the minimum age of the marriage under Nepali law is 20 years age. This is the third highest rate of […]
भोलिदेखि काठमाण्डौ–दाङ–काठमाण्डौं दैनिक दुईपटक उडान हुने
दंगीशरण खबर २१ श्रावण २०७६, मंगलवार १३:१३
दंगीशरण खवर साउन, २१ घोराही । भालीदेखि काठमाण्डौं–दाङ–काठमाण्डौको लागि दैनिक दुइपटक हवाई उडान हुने भएको छ । यात्रुहरुको चापलाई मध्यनजर गर्दै भोलि साउन २२ गतेदेखि काठमाण्डांै–दाङ–काठमाण्डौंका लागि दिनमा दुइपटक उडान गर्न लागिएको तुलसीपुर उपमहागरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेयले जानकारी दिए । उनका अनुसार यात्रुहरुलाई सहज सुविधा बनाउनका लागि नेपाल एअरलाइन्सको कार्यालय […]
दंगीशरण खबर २९ कार्तिक २०७८, सोमबार १०:५०
ओखलढुङ्गा, २९ कार्तिक । ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी ककनी मन्दिरका लागि दर्शनार्थी बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । सुनकोशी गाउँपालिका ९ को जौबारी नजिकैको कुसाङ भन्ने ठाउँमा प्रदेश ३–०१–०२२ च ९६९४ नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु भएको हो भने १४ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय […]
घोराही, २८ कार्तिक । घोराहीस्थित कलश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को दशौं वार्षिक साधारणसभा आज सम्पन्न भएको छ । संस्थाका अध्यक्ष बालचन्द्र शर्माको अध्यक्षता तथा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा साधारणसभा भएको हो । संस्थाका सञ्चालन समिति सदस्य माधव खनालको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको […]
काठमाडौं, २८ कार्तिक । नेकपा एमालेमा दशौँ महाधिवेशनका लागि ५० भन्दा बढी जिल्लामा १२ सय प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन गरेको छ । स्थानीय अधिवेशनबाटै सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको अभ्यास सुरु गरेको एमालेमा पार्टी मूल नेतृत्वले समझदारीबाटै प्रतिनिधि चयनको निर्देशनात्मक सन्देश प्रवाह गरेपछि अधिकांश प्रतिनिधि सर्वसम्मत विधिबाटै छनोट भएका छन् । कुन प्रदेशमा के […]
दंगीशरण खबर २६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०८:५३
घोराही, २६ कार्तिक । नेपालकम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नेता मेघबहादुर विसीको ७४ वर्षको उमेरमा आज शुक्रबार निधन भएको छ। नेकपा एमालेका पुराना नेताका रुपमा परिचित विसीको गएको मध्यराति घोराही खिरिट्टेस्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको हो । दंगाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेता विसीको ठूलो योगदान रहेकाले उनको निधनबाट पार्टीलाई अतुलनिय क्षति भएको […]
दंगीशरण खबर १५ कार्तिक २०७८, सोमबार १४:०१
दाङ, १५ कार्तिक । दाङ प्रहरीले करीव एक वर्ष पहिले जवरजस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ गरेको छ । पक्रउ पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ३ रानागाउँका २७ वर्षका खुमबहादुर थापा रहेको छन् । थापालाई दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले २०७७ मंसिर २१ गते जवरजस्ती करणी मुद्दामा १२ वर्ष कैद ५० हजार रुपैयाँ […]
दाङमा साढे ४ लाख नगदसहित २० जुवाडे पक्राउ
दंगीशरण खबर १५ कार्तिक २०७८, सोमबार १३:४९
घोराही, १५ कार्तिक । दाङमा प्रहरीले साढे ४ लाख बढी नगदसहित २० जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ सझेनास्थित यज्ञ खड्काको घरमा जुवा खेलिरहेको अबस्थामा उनीहरुलाई प्रहरीले ४ लाख ६४ हजार ८८१ रुपैयाँ नगदसहित नियन्त्रणमा लिएको हो । गोप्पे सूचनाका आधारमा उनीहरुलाई आइतवार राति नगद, […]
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै कानून व्यवसायीको प्रर्दशन
दंगीशरण खबर १४ कार्तिक २०७८, आईतवार १३:०६
काठमाडौं, १४ कार्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा गर्दै नेपाल बार एसोसिएशनका कानून व्यवसायीहरुले बार परिषरमा प्रदर्शन गरेको छन् । उनीहरुले आजदेखि आन्दोलन कार्यक्रम समेत शुरु गरेको छन् । आन्दोलनको पहिलो दिन आज कानुन व्यवसायीले बिहान एक घण्टा हातमा कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरे । बारको नेतृत्वमा उनीहरुले बिहान […]
पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै कालीपोखरी
दंगीशरण खबर १४ कार्तिक २०७८, आईतवार ०८:०५
रोल्पा, १४ कार्तिक । रोल्पाको कालीपोखरीलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न थालिएको छ । रोल्पा नगरपालिका–४ स्थित सामुदायिक वनमा पर्ने कालीपोखरीलाई आन्तरिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न स्थानीयवासी जुटेका छन् । प्राकृतिक रूपमा सुन्दर रहेको कालीपोखरीको धार्मिक रूपमा पनि उत्तिकै महव रहेकाले यसको प्रवर्द्धनमा आफूहरू जुटेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ […]
विपन्नलाई उद्यमशीलता तालिम
दंगीशरण खबर १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०८:३१
घोराही । मुक्तकमलरी विकास मञ्चको आयोजनामा व्यवसाय गरिरहेका र गर्न चाहेका मुक्तकमलरी, हिंसा प्रभावित, पीडित र आर्थिक रुपमा विपन्न महिलाहरुको पहिचान गरी व्यावसायिक क्षमता विकास तथा उद्यमशीलता सम्बन्धी तालिम शुरु गरिएको छ । आईएम नेपालको आर्थिक सहयोगमा दाङमा रहेका लक्षित वर्गका महिलाहरु मध्ये व्यवसाय गरिरहेका र गर्ने सोँच बनाएकाहरुलाई एकै […]
नेकपा एमाले घोराहीको १० बुँदे निर्णय
दंगीशरण खबर १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०८:२७
घोराही, १२ कार्तिक । नेकपा एमाले घोराही उपमहानगरको प्रथम बैठकले मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक तथा समसामयिक विषयमाथि ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै १० बुँदे निर्णय गरेको छ । मंगलबार सम्पन्न पालिका अधिवेशनको समीक्षा गर्दै नेकपा एमाले घोराही नगर कमिटीले वर्तमान राजनीतिक अवस्था र समसामयिक विषयमाथि ध्यानाकर्षण गराउँदै १० बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको हो […]
दर्शनार्थी बोकेको जीप दुर्घटना हुदाँ तीन जना १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०८:२७
कलशको दशौ बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०८:२७
एमाले दशौँ महाधिवेशन : ५० बढी जिल्लामा सर्वसम्मत प्रतिनिधि छनोट १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०८:२७
कम्युनिष्ट पार्टीका पुराना नेता विसीको निधन १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०८:२७
जवरजस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी प्रहरी नियन्त्रणमा १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०८:२७
दाङमा साढे ४ लाख नगदसहित २० जुवाडे पक्राउ १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०८:२७